Ukufinyelela Kokuthengisa: Amasu Ayisithupha Awina Izinhliziyo (Namanye Amathiphu!) | Martech Zone
Ukubhala izincwadi zebhizinisi kungumqondo osuka emuva kokwedlule. Ngalezo zikhathi, izincwadi zokuthengisa ngokomzimba beziwumkhuba obekuhloswe ngawo ukufaka esikhundleni sabathengisi bendlu ngendlu nezinkundla zabo. Izikhathi zanamuhla zidinga izindlela zesimanje (bheka nje izinguquko ekubonisweni kokukhangisa) nokubhala izincwadi zokuthengisa zebhizinisi akunjalo.
Abanye izimiso ezijwayelekile maqondana nefomu nezakhi zencwadi yokuthengisa enhle zisasebenza. Lokho kusho, ukwakheka nobude bencwadi yakho yebhizinisi kuya ngohlobo lwezethameli zakho nomkhiqizo ofisa ukuwuthengisa. Ubude obujwayelekile yizigaba ezi-4-8, kepha zingaba ngaphezulu uma imikhiqizo yakho idinga incazelo enembile, noma ngaphansi, ngokunikezwa okuqondile.
Kodwa-ke, sizogxila kuma-hacks awusizo angakusizi kuphela ukuvala amadili kepha futhi anqobe izinhliziyo zezithameli zakho.
Isu 1: Sebenzisa i-Automation Ukwenza Izincwadi Zokuthengisa Zebhizinisi Lakho
Uma ufuna izinhlamvu zakho zokuthengisa zebhizinisi zizuze izinhliziyo, kuzodingeka uvelele ngezindlela eziningi. Okokuqala, uzodinga ukudala ubuciko futhi wenze okuthile komuntu siqu. Ukuthumela amanothi abhalwe ngesandla kuyindlela enhle yokwenza ukuthi izincwadi zakho zithunyelwe, noma kunjalo, ukuzibhala ngawodwana kungadla isikhathi.
Ngenhlanhla, ungasebenzisa insizakalo yezincwadi ebhalwe ngesandla eyenza yonke inqubo isebenze futhi yenze umbhalo wakho ubonakale sengathi wawubhalwe ngesandla somuntu usebenzisa ipeni langempela. Ukuthumela incwadi yebhizinisi kanjena, ngesitayela sokubhala esikhangayo, esenzelwe wena, kuyindlela enhle yokuwina inhliziyo yomamukeli.
Isu 2: Faka Ubufakazi Obunamandla Bomphakathi
Akukho okuthengisa kangcono kunomkhiqizo obizwe ngokuthi "ushintsha impilo" ngemibono kanye nokuhlangenwe nakho kwalabo abawusebenzisile. Lokho akusho ukuthi umkhiqizo wakho udinga izinguquko, kepha kufanele ube nobufakazi obuqinile bezenhlalo obenziwe ngamazwi amakhasimende anelisekile.
Kungakho kukuhle ukufaka ubufakazi bezenhlalo ezincwadini zakho zokuthengisa. Ukunikeza izixhumanisi kubufakazi bevidiyo kungenye yezindlela zokwenza lokho. Le ndlela ifakazelwa ukuthi ishayela ngokuthengisa ngempumelelo.
Ubufakazi bevidiyo yamakhasimende buyisandulela senkinobho ye-CTA (Call to Action) okufanele ibekwe ngaphansi kobufakazi. Inhloso ukusebenzisa umfutho wemizwelo eyakhayo nogqozi obufakazelwe ngubufakazi bakho kubabukeli futhi ngokwemvelo ubanikeze ithuba lokuthenga (nge-CTA).
Isu 3: Sebenzisa amathuluzi we-LinkedIn Automation
Ayikho indawo engcono yokuthi abathengisi be-B2B basebenzise futhi bathumele izincwadi zokuthengisa kune-LinkedIn. I-LinkedIn iyinkundla enkulu yebhizinisi lapho zonke izinhlobo zochwepheshe zihlangana khona ukuze zifunde, zixhumane, zikhulise ibhizinisi labo futhi zithengise imikhiqizo noma izinsizakalo zazo. Kuyimakethe eyingqayizivele enamathuba amaningi okufanele asetshenziselwe isu lakho lokuthengisa.
Abaningi Amathuluzi we-LinkedIn automation ingakusiza ufeze amazinga aphezulu wokwenza ngezifiso ngendlela yokudala. Isibonelo, amanye ala mathuluzi anikezela ngezifiso zesithombe ukuze ukwazi ukwengeza igama lomamukeli noma isithombe sephrofayili ngaphakathi kwesithombe, ukusenza sibe ngesomuntu uqobo. Amathuluzi we-LinkedIn automation angalahla imininingwane enembile kusuka kumaphrofayili wezithameli zakho futhi enze imilayezo eyenziwe yaba ngeyakho futhi enembile njengoba umuntu ayibhala.
Isu 4: Yenza I-Opening Line Ibe Yakho
Iphutha elilodwa elikhulu lapho ubhala incwadi yokuthengisa ukubingelela okungafanele. Akekho umuntu othanda imikhonzo ejwayelekile efana nokuthi “Mthengi othembekile othandekayo” noma “Mfundi othandekayo”. Esikhundleni salokho, izethameli zakho zifuna ukuzizwa zikhethekile, zihlonishwa, futhi ziphathwa ngokuhlukile.
Yingakho ukufaka amagama abo nobungcweti (bamabhizinisi we-B2B) ekubingeleleni kwakho, kuyindlela eqinisekile yokubabonisa ukuthi ukhuluma nalowo muntu othile. Ukuhamba ngo "Ben othandekayo" noma "Dokotela Othandekayo Richards" kuzokuyisa kude futhi kuqinisekise ukuthi umamukeli uzofuna ukufunda incwadi yakho ngokuqhubekayo.
Ngezithameli eziningi, kunzima ukubhekana ngesandla nomuntu ngamunye ngendlela eyingqayizivele futhi ubhale zonke izinhlamvu eziqondene nabo. Yilapho i-automation ingena kalula futhi igcina isikhathi esiningi ngokuqoqa ngesandla imininingwane efana negama, ubungcweti, ubulili, njll.
Isu 5: Sebenzisa Amavidiyo Ekuthengiseni Kwakho Ukuthengisa
Ividiyo okwamanje ingenye kakhulu amafomethi wokuqukethwe afiselekayo lokho kuqhuba ukuzibandakanya ngendlela emangalisayo futhi kungacwilisa izethameli ngaphezu kwanoma iyiphi enye ifomethi. Kufanele uyisebenzise ngokunenzuzo yakho bese uyifaka ezinhlamvwini zebhizinisi lakho ukwenza ukuthengisa kwakho kuphumelele kakhudlwana.
Iphimbo levidiyo lingadonsa ukunaka kwesibukeli ngokushesha bese lixoxa ngamafuphi ngezihloko ozojwayele ukumboza zona usebenzisa ifomethi yombhalo. Ngevidiyo, ungafaka izigcawu ezenzekayo zensizakalo yakho ezisebenzayo, ubonise ukwaneliseka kwekhasimende lakho, futhi ekugcineni, xhuma ujule nezithameli zakho.
Amathuluzi amaningi angakusiza wenze umlayezo wevidiyo owenzelwe wena ugcwale opopayi abacebile nokubukwayo okudonsa amehlo, okuzoshayela ukuguqulwa.
Isu 6: Sebenzisa Isilinganiso Sokubala Isikhathi
Ungafaka isikhathi sokubala phansi kuma-imeyili wakho wokuthengisa njengoba angakha umuzwa wokuphuthuma kumuntu ofundayo. Lezi zibali sikhathi kufanele zibekwe phezulu, ngaphansi kwesihloko, zakhiwe ngokubukeka okuhehayo okuheha ukunakwa.
Inhloso yakho akukhona ukuwasheshisa kepha ukukhombisa izici ezihamba phambili zomkhiqizo wakho futhi ugcizelele ukuthi isikhathi sokwenza silinganiselwe. Lokho kusho, usadinga ukuba nesisombululo esisebenzayo samaphoyinti abo obuhlungu kanye nendlela efanele yokukubonisa.
Nawa Amanye Amathiphu Wokuthengisa Okungeziwe
Nawa amanye amathiphu okwenza izinhlamvu zakho zokuthengisa zebhizinisi zinqobe izinhliziyo:
Qiniseka ukuthi uyazi izithameli zakho futhi uzihlukanise kahle ukuze wazi imininingwane yazo
Dala izihloko zezindaba eziphoqayo nezihlokwana ezihambisana nohlobo lwezithameli zakho
Faka ama-CTA angaphezu kweyodwa lapho kungokwemvelo (ngaphansi kwe- ubufakazi bevidiyo, ekugcineni kwencwadi, njll.)
Sebenzisa izingwegwe ukudala imizwa kubafundi bakho
Sebenzisa amabhokisi ayimfihlakalo kuyo yonke incwadi yakho ukwenza abafundi bafunde kabanzi kokunye ku- yixazulule
Hlala ubeke umnikelo wakho ekhasini lokuqala
Ungayidluli ngolwazi, faka amaqiniso amahle kakhulu, izici, nezinye izici ezithile umkhiqizo wakho nensizakalo yakho enakho
Sebenzisa amasu afakazelwe afana ne- Ibhokisi likaJohnson ukugqamisa izinzuzo zokunikezwa kwakho kuyo yonke incwadi
Liyini ibhokisi likaJohnson?
Eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule, uchwepheshe wezokukhangisa uFrank H. Johnson wahlola ukuthi angakwazi yini ukwandisa amazinga okuphendula ezincwadini zakhe zokuthengisa ngokusebenzisa indlela eyaziwa ngothando njenge UJohnson Box. IJohnson Box isho lokhu okunikezwayo esihlokweni esingenhla kwesibingelelo.
Ukubhala ukufinyelela ezinhle zokuthengisa zebhizinisi kuyindlela ecabangayo nefunayo. Amagama akho kufanele abhalwe ngokucophelela, okuqukethwe kwakho kuhleleke kahle futhi okuvelayo ngemuva kokufunda kufanele kumemeze "lo mkhiqizo unika inani".
Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisa ama-hacks kuzokongela isikhathi sakho futhi kunikeze izinqamuleli zokugwema ukwenza imisebenzi engafuneki ngesandla. Ama-Hacks angangeza futhi ukuthinta kobuntu nobuciko kokuqukethwe kwencwadi yakho yokuthengisa, eyenzelwe izethameli zakho kanye nemininingwane yazo.
Ikhophi yokuthengisa eqinile ingumongo wencwadi yebhizinisi ephumelelayo futhi ngobuhlakani ukusebenzisa ama-hacks umnyango wokuwina izinhliziyo zabemukeli.
Tags: izincwadi zebhizinisicountdownIsilinganiso sokubala isikhathictamail ngqouFrank johnsonubuchwepheshe bokubhala ngesandlaokubhalwe ngesandlainsizakalo yezincwadi ebhalwe ngesandlasibongileukubhala izincwadi zokuthengisajohnson boxincwadi yezincwadiukubhala incwadiukuxhumana okuzenzakalelayoumugqa wokuvulaamathiphu okufinyelelaikhophi yokuthengisaukubhala ikhophi yokuthengisaizincwadi zokuthengisaukufinyelela ekuthengiseniamathiphu okufinyelela kubantu abathengisayoamavidiyo wokufinyelela okuthengiswayo